Knowledges Archives - MM Daily Life
မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ
March 1, 2022 by MM Daily Life
မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ သစ်ပင် ပန်းပင်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။ မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ခြံ ထဲ၊ အိမ် ဝန်းထဲမှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ ရှေးမြန်မာအယူအရ မိမိ အိမ်၊ ခြံ ထဲမှာ မစိုက်အပ် ၊ မရှိသင့်တဲ့ အပင်တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီအယူအဆတွေ ခေတ်မမီတော့ဘူးလို့ဘဲ ဆိုဆို ၊ ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားပဲ ပြောပြော အိမ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှေးမြန်မာ အယူတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သောအပင်များ ။ အိမ်၏ အရှေ့ဘက် မျက်နှာဘက်တွင် ညောင် … Read more
သားသမီးတွေကို ဆုံးမတဲ့အခါ လက်ကိုင်ပြုသင့်တဲ့အချက် (၁၀)ချက်…
February 28, 2022 by MM Daily Life
သားသမီးတွေကို ဆုံးမတဲ့အခါ လက်ကိုင်ပြုသင့်တဲ့အချက် (၁၀)ချက် ၁။သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ချစ်ရင် အဆဲမပါပဲ စကားပြောတတ်အောင်ကလေးတွေကို သင်ပေးသင့်တယ်။ ၂။ ရန်ဖြစ်ရင် ကိုယ့်ဘက်က အနိုင်ယူဖို့ထက်ရန်မဖြစ်အောင် နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ကို ပိုပြီးသင်ပေးသင့်တယ်။ ၃။ တချို့တောင်းပန်ခြင်းတွေက ကိုယ့်ဘက်ကမှားလို့မဟုတ်ပဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ပိုပြီးသင့်မြတ်အဆင်ပြေဖို့အတွက် တောင်းပန်ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးသင့်တယ်။ ၄။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီက တစ်ခုခုရလိုက်လို့ခံစားရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးထက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပေးဆပ်လိုက်ရလို့ ကြည်နူးရတဲ့ ပီတိတွေအကြောင်းကို သေချာပြောပြသင့်တယ်။ ၅။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသောလူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို မနာလိုဝန်တိုစိတ်မမွေးပဲထိုလူရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် လက်ခုပ်သံအကျယ်ကြီးတီးပြီး မုဒိတာ ပွားနိုင်အောင် သင်ကြားပေးသင့်တယ်။ ၆။ တရားမျှတတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေ ပြိုင်တဲ့အခါဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ အရှုံးအနိုင်ကို လက်ခံနိုင်ဖို့သင်ကြားပေးသင့်တယ်။ ၇။ မြေပေါ်ကျသွားတဲ့ မုန့်လေးဟာ ကိုယ့်အတွက်အသုံးမဝင်ခဲ့ရင်တောင် အခြားသက်ရှိသတ္တဝါတွေ ( ဥပမာ-ပုရွက်ဆိတ် )လိုသတ္တဝါလေးတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့အထိ တွေးနိုင်အောင် ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားကိုသေချာပြုစု … Read more
ဒီ Post လေးဖတ်ပြီး မနက်ဖြန် ကစပြီး ဘဝ မှာ ဘာတွေ အရေးကြီး လဲ မြင်နိုင်ကြပါစေ
ဒီ Post လေးဖတ်ပြီး မနက်ဖြန် ကစပြီး ဘဝ မှာ ဘာတွေ အရေးကြီး လဲ မြင်နိုင်ကြပါစေ အချိန် တစ်ရက် ဒေါ်လာ တစ်သန်း (ဒီ Post လေးဖတ်ပြီး မနက်ဖြန် ကစပြီး ဘဝ မှာ ဘာတွေ အရေးကြီး လဲ မြင်နိုင်ကြပါစေ) လူတစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ် ကတဲက ပိုက်ဆံ ကို မစားရက် မသောက်ရက် စုဆောင်းတယ်။ အသက် ၄၀ ပြည့်တဲ့အခါ သူ့လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာ တစ်သန်းစုမိနေပြီ။သူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိတ်ပြီး ကြိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီး က လည်း သဘောတူလို့ မနက်ဖြန်မှာ လက်ထပ်ကြတော့မယ်။ တစ်သက်လုံး စုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ … Read more
ငွေဝင်စေသော အိပ်မက် နိမိတ်လေးများ
February 23, 2022 by MM Daily Life
အိမ်မက် အမျိုးမျိုးတို့ရှိပါတယ် အချို့ အိမ်မက်တွေက ရှေ့မှာဖြစ်လာတော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ်ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးရှိနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာဓက တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ ငွေတွေဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို နိမိတ်ပြအိမ်မက် မျိုး တွေမက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ filipinotimes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နို့ သို့မဟုတ် ပျားရည် အိမ်မက်ထဲမှာ နို့ တွေကို မက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို မက်တာ မျိုးက မကြာခင်မှာ ငွေ ဝင် တော့မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ် ပါ။ ဥပမာ- ပျားအုံကြီးကို ပျားရည်ညှစ်တာ မျိုး၊နွားနို့ ညှစ်တာမျိုး၊နို့ တွေက လမ်း တွေ ပေါ် မှာဖုံးလွှမ်းနေတာ မျိုး … Read more
ဘဝကို (သုည)က စပါ (၁)မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပီးဖတ်ပါ
January 23, 2022 by MM Daily Life
ဘဝကို (သုည)က စပါ (၁)မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပီးဖတ်ပါ တစ်ခါတုန်း ဘီလျှံနာသန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်သမားလူငယ်နှစ်ယောက်ရှိသတဲ့ ဘီလျှံနာသန်းကြွယ်သူဌေးဟာ အလွန်ဉာဏ်ကောင်းပြီး ရိုးသားကြိုးစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သန်းကြွယ်သူဌေးဆီမှာ ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ဟာ အလုပ်လုပ်လာတာဆယ်နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ တစ်နေ့တော့ သန်းကြွယ်သူဌေးက သူ့ရဲ့အလုပ်သမား နှစ်ယောက်ကိုခေါ်မေးသတဲ့..” ကဲ အခုမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါ့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်လာတာဆယ်နှစ်ရှိပြီ မင်းတို့ဘာတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီလည်း”တဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဘာမှမစုမိသေးပါဘူးလို့ဖြေတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မြေလေတစ်ကွက်ပဲပိုင်ပါသေးတယ်လို့ဖြေတယ်။သူဌေးက ဆက်ပြောတယ်။ ”မင်းတို့ငါ့ဆီမှာအလုပ်လုပ်တာဆယ်နှစ်ရှိပြီ နင့်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် ငါဟာ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မင်းတို့ရဲ့ကြိုးစားမှု့ကိုငါ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ မင်းတို့ကို အဆုချီးမြှင့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါမင်းတို့ကို ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုပေးမည်။ မင်းတို့ကြိုက်တာယူပါ”ဟုဆိုကာသူဌေးက ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။ ”ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုမှာ တစ်ခုက ပိုက်ဆံ မင်းတို့ဘဝပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အထိငွေပမာဏကိုတောင်းပါ။ နောက် တစ်ခုက ငါချမ်းသာအောင်မြင်လာတဲ့နည်းလမ်းကို သင်ပေးမည် မင်းတို့ကြိုက်တာယူပါ”ဒါနဲ့.. လူငယ်တစ်ယောက်က ” ကျွန်တော်ကို ငွေသိန်းငါးထောင်ပေးရင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်”တောင်းလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ”ကျွန်တော်ငွေမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို … Read more
သွားတိုက်ဆေးအခွံမှာ ပါတဲ့ အရောင်တွေ သင်သိရင်တော့ အံသြသွားပါလိမ့်မယ်
January 8, 2022 by MM Daily Life
သွားတိုက်ဆေးအခွံမှာ ပါတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ မှတ်သားထားတဲ့ လေးထောင့်ပုံသင်္ကေတလေးက အထဲမှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖော်ပြနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သွားတိုက်ဆေးဝယ်ရင်း အခွံအောက်ခြေက အရောင်ပါတဲ့ သင်္ကေတလေးကို သေချာကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတာ သင်သိရင်တော့ အံသြသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရောင်ပါတဲ့ သင်္ကေတအမှတ်အသားလေးက အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အရာတွေကို ရည်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီး လွဲမှားစွာ နားလည်နေကြပါတယ်။ ဒီဟာလေးက အထဲမှာပါတဲ့အရာတွေ ဥပမာ – ဓာတုပစ္စည်း ၊ သဘာဝပစ္စည်း ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စသည်ဖြင့်ဖော်ပြနေတယ်လို့ ထင်နေကြတာပါ။ ဒီအချက်အလက်တွေက တကယ်တမ်းတော့ သိပ်ရှင်းလင်းမှုမရှိဘဲ အသုံးမဝင်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သဘာဝပစ္စည်းများသာ ပါသည်လို့ ပြထားပေမယ့် ဓာတုပစ္စည်းတွေလည်း ပါနေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာလည်း သိပ်ပြီး တိကျမှုမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ် ဒီအရောင်အမှတ်အသားလေးက အထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကို ရည်ညွှန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ … Read more
သင္ ကားဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒါေလးအရင္ဖတ္ထားလိုက္ပါ…
January 7, 2022 by MM Daily Life
သင္ ကားဝယ္ေတာ့မယ္ဆို ဒါေလးအရင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ မ်က္ျမင္ ကား သြားဝယ္မယ့္ အမ်ိဳးေတြ အေတြးမမွား ေဈးမမ်ားေစဖို႔ ဒါေလးေဆာင္ထား အၾကမ္းအားျဖင့္ ေတာ့ မမွားႏိုင္ေတာ့ပါ ၁။ ကား ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္း ရရွိၿပီးအရိပ္ေအာက္သက္ေတာင့္သက္သာ ၾကည့္ႏိုင္ေသာေနရာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးေန႔လည့္ခင္း ေနပူေအာက္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းေရွာင္ပါ။ အပူဒါဏ္ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ကားၾကည့္ရႈေသာအခါတြင္သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္လို႔စစ္ရမွာေတြက်န္ခဲ့တတ္ပါတယ္ အပူဒါဏ္သက္သာေအာင္ဆိုၿပီးညေနဘက္နဲ႔မိုးခ်ဴပ္ပိုင္းေတာ့ ကား ၾကည့္ဖို႔မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေနာ္သေဘာေပါက္ပါေရထဲ ပိုက္ဆံလြင့္ျပစ္လိုက္ရင္ေတာင္အသံျမည္ဦးမွာပါ ၂။ ကား ကိုေတြ႕တာနဲ႔ကားထိုင္ခုံခါးပတ္ကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါခါးပါတ္ေခါင္းေတြမွာထုတ္တဲ့ ခုႏွစ္ေတြ အတိအက်ေရးထားပါတယ္ၿဖဲထားတာမ်ိဳး ၊ကတ္ေၾကးနဲ႔ ျဖတ္ထားတာမ်ိဳးမျဖစ္ရပါဘူး။ ၾကည့္တာနဲ႔ေတြ႕ရပါမယ္ကားပိုင္ရွင္ ပါးစပ္ကဘယ္ႏွခုႏွစ္ပါလို႔ အျမဳတ္ထြက္ေအာင္ေျပာေနလဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔မ်က္စိရယ္ ဦးေႏွာက္ရယ္နဲ႔ဘဲအလုပ္လုပ္ ၾကရမွာျဖစ္လို႔ က်န္တာေတြ ခဏ ေမ့လိုက္ပါ။ ၃။ ကား ကိုစက္ႏႈိး ပါ ၿပီးတာနဲ႔အဲကြန္းဖြင့္လိုက္ပါ စက္သံသည္ဆူညံ က်ယ္ေလာင္ တာမ်ိဳးကိုေတာ့ ခြဲတတ္ပါေစၿပီးလွ်င္အဲကြန္းေလေအး မ … Read more
WiFi လိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း (၈) မျိုး…
WiFi လိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း (၈) မျိုး။ အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့ အပျော်က တခြားအပျော်တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းရင်လည်း တော်တော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi လိုင်း မကောင်းတာက တစ်ခါတလေ operator နဲ့ သက်ဆိုင်သလို တစ်ခါတလေ ကျတော့လည်း အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ နဲ့ သက်ဆိုင်နေ ပါတယ်။ ၁။ သတ္တုမျက်နှာပြင်နှင့် သတ္တုနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ သတ္ထုတွေက လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူပါတယ်။ WiFi က လျှပ်စစ်သံလိုက် လှိုင်းကို ထုတ်လွှတ်တဲ့ အတွက် သတ္ထုမျက်နှာပြင် ဒါမှမဟုတ် သတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေက လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကို ဟန့်တားနေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် WiFi … Read more
အမ်ားအားျဖင့္ အေရွ႕အရပ္နဲ႔ေတာင္အရပ္ကိုသာ ေခါင္းျပဳအိပ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
ဘာေၾကာင့္ အေရွ႕အရပ္နဲ႔ ေတာင္အရပ္ကို ေခါင္းျပဳၿပီး အိပ္သင့္တာလဲ.? ကြၽန္မတို႔ ငယ္ငယ္က အေရွ႕ဘက္နဲ႔ ေတာင္ဘက္ကို ေခါင္းျပဳၿပီး အိပ္ရ တာ ကို ဘာသာေရး အရ ၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာ အရ အိပ္ရတယ္ လို႔ပဲ ထင္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အေရွ႕ရပ္ နဲ႔ ေတာင္ အရပ္ကို ေခါင္း ျပဳ ၿပီး အိပ္တယ္ ဆိုတာ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ေကာင္းက်ိဳး ေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို သိခဲ့တဲ့ ပညာရွိ ေရွးလူႀကီးေတြက လက္ဆင့္ကမ္း မွာၾကားလာတာ က ေန ဘာသာေရးလိုလို ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္း လိုလို ျဖစ္လာ ခဲ့မယ္ လို႔ ထင္မိပါတယ္။ သိပၸံနည္း အရပဲ … Read more
အသက္ ( ၅၀ ) မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ခ်င္ရင္ အသက္ ( ၃၀ ) မွာဒါေတြစၿပီး လုပ္ထားသင့္ပါၿပီ
January 6, 2022 by MM Daily Life
အသက် ( ၅၀ ) မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင် အသက် ( ၃၀ ) မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားသင့်ပါပြီ အသက် ၃၀ တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်တွေကို တကယ်စလုပ်သင့်ပါပြီ။အသက် ၅၀ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ချင်ရင်အသက်၃၀ မှာဒါတွေစပြီး လုပ်ထားပါအသက် ၅၀ အရွယ်တွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိသလဲမေးခဲ့ပါတယ် အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်၃၀တန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်သင့်ပါပြီ..! ၁. ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့။ သောက်မိပြီ ဆိုရင် ဖြတ်ပစ်ပါ။ ၂. အမြန်စာတွေကို မစားပါနဲ့တော့။ ၃. မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ .. ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပါစေ။ ၄. နေရောင်ကာဆေးမပါဘဲ နေပူထဲ မထွက်ပါနဲ့တော့။ ၅. ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ ၆. ပိုက်ဆံ စစုပါ။ ဘယ်လောက်နည်း နည်း … Read more